OLAC Record: Fonds Denise Bernot, birman, 1961, bande 050, face A
Title: Fonds Denise Bernot, birman, 1961, bande 050, face A
Abstract: Suite de la lecture du livre de lecture n°2 d'U Kun (le début se trouve dans l'enregistrement de 1961, bande 050_faceB). Madame Brenda Pe Maung Tin lit la fin de la leçon 23, un dialogue entre deux amis, le premier racontant au second l'histoire de Robinson Crusoe (jusqu'à 1.36mn). Leçon 24: jataka du singe et du crocodile (jusqu'à 3.15mn) Leçon 25: dialogue entre un enfant et sa mère, conte de la tortue et du lièvre. (jusqu'à 3.48mn). Leçon 26: phrases descriptives sur l'état du ciel (jusqu'à 4.06mn). Leçon 27: phrases descriptives sur le paysage (jusqu'à 5.20mn). Première année, Recueil de textes de lecture birmans, écrit par U Wun (Min Thu Wun) et U Ba Lectures 1 à 5: description d'un village et son environnement (jusqu'à 12.38mn). Lecture 6: description du petit chien de garde Taw Bwa (jusqu'à 13.55mn). Lecture7: description d'une promenade dans la forêt avec le petit chien Taw Bwa (jusqu'à 15.45mn) Lecture 8: description du travail des rizières. (jusqu'à 17.20mn) Lecture9: description du jardinage. (jusqu'à 18.50mn) Lecture 10: dialogue entre deux jeunes hommes (jusqu'à 20.33mn). Lecture 11: description de la soirée (jusqu'à 22.10mn) Lecture 13 : description d'une chouette et d'un corbeau (jusqu'à 24.15mn). Lecture 12: description d'un jour de pluie (coupée et reprend jusqu'à 25.50mn). Deuxième année, Recueil de textes de lecture, par U Wun Lecture p. 3: histoire du roi de Bénarès, de son fils colérique et de l'ermite (jusqu'à 30.00mn) Lecture p. 5: poème sur la lune (jusqu'à 30.45mn) Lecture p. 7: jataka du canard sacré (hamsa) (jusqu'à 35.10mn) Lecture p. 9: jugement de Mahawthahta (jusqu'à 39.15mn). Lecture p. 17: poème sur les mois birmans par Min Thu Wun (jusqu'à 40.29mn). Lecture (non annoncée): jugement de Mahawthahta (jusqu'à 43.50mn). Lecture p. 16: poème de Min Thu Wun sur les écureuils (jusqu'à 44.35mn). Lecture p. 17: poème sur un oiseau de la forêt (jusqu'à 46.25mn).
Second part of U Kun's reading book (the first part can be found in recording crdo-BER_1961_BUR_050_B). Ms Brenda Pe Maung Tin reads the end of lesson 23,adialogue between two friends, one telling the story of Robinson Crusoe to the other (until 1.36 min.). Lesson 24: jataka of the monkey and the crocodile (until 3.15 min.) Lesson 25: dialogue betweenachild and his mum, tale of the tortoise and the rabbit (until 3.48 min.) Lesson 26: description of the sky (until 4.06 min.). Leçon 27: description of landscapes (until 5.20 min.). First year, Myanmar Text Book, by U Wun (Min Thu Wun) and U Ba Readings 1 to 5: aboutavillage and its surroundings (until 12.38 min.). Reading6: about the little watchdog Taw Bwa (until 13.55 min.). Reading7: about walking Taw Bwa in the forest (until 15.45 min.) Reading 8: about working in the rice fields (until 17.20 min.) Reading 9: about gardening (until 18.50 min.) Reading 10: dialogue between two young men (until 20.33 min.). Reading 11: about the evening (until 22.10 min.) Reading 13: about an owl andacrow (until 24.15 min.). Reading 12: aboutarainy day (until 25.50 min.). Second year, Myanmar Text Book by U Wun Reading p. 3: story of the king of Benares, his angry son, and the hermit (until 30.00 min.) Reading p. 5: poem about the moon (until 30.45 min.) Reading p. 7: jataka of the sacred duck (hamsa) (until 35.10 min.) Reading p. 9:ajudgement of Mahawthahta (until 39.15 min.). Reading p. 17: poem about the Burmese months by Min Thu Wun (until 40.29 min.). Reading (no page number):ajudgement of Mahawthahta (until 43.50 min.). Reading p. 16: poem of Min Thu Wun about squirrels (until 44.35 min.). Reading p. 17: poem about forest birds (until 46.25 min.).
ဦးကွန်၏ဖတ်စာအုပ်ဖတ်ခြင်းဒုတိယပိုင်း[ပထမပိုင်းအသံသွင်းဖိုင် BER-1961 BUR-050- B တွင်တွေ့နိုင်သည်] မစ္စဘရန်ဒါဖေမောင်တင်သည် သင်ခန်းစာ ၂၃ အဆုံးပိုင်းတွင် သူငယ်ချင်းနှစ်ဦးအကြား အပြန်အလှန်စကားပြောဆိုနေခြင်း၊ တဦးက ရော်ဘင်ကရူးဆိုး ပုံပြင်ဝတ္ထုကို အခြားတဦးအားပြောဆိုနေခြင်းအကြောင်း ဖတ်ကြားသည်။ (၁.၃၆ မိနစ်ထိ) သင်ခန်းစာ ၂၄။ ။ ဇာတ်တော်လာ မျောက်နှင့်မိကျောင်းဝတ္ထု (၃.၁၅ မိနစ်) သင်ခန်းစာ ၂၅။ ။ ကလေးနှင့် သူ့မိခင် တို့နှစ်ဦးကြားစကားပြောခန်း- လိပ်နှင့်ယုန်ပုံပြင် (၃.၄၈ မိနစ်) သင်ခန်းစာ ၂၆။ ။ မိုးကောင်းကင်အကြောင်းဖော်ပြချက် (၄.၀၆ မိနစ်) သင်ခန်းစာ ၂၇။ ။ ရှုခင်းများအကြောင်းဖော်ပြချက် (၅.၂၀ မိနစ်) ပထမတန်း၊ မြန်မာဖတ်စာအုပ်၊ ဦးဝန်[ မင်းသုဝဏ်] နှင့် ဦးဘ ရေးသည်။ ဖတ်စာ ၁ မှ ၅။ ။ ကျေးရွာတရွာနှင့် ယင်းရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်း (၁၂.၃၈ မိနစ်) ဖတ်စာ ၆။ ။ လုံခြုံရေးခွေးငယ်လေး တိုးပွား အကြောင်း(၁၃.၅၅မိနစ်) ဖတ်စာ ၇။ တိုးပွား တောတွင်းလမ်းလျှောက်ခြင်းအကြောင်း (၁၅.၄၅ မိနစ်) ဖတ်စာ ၈။ စပါးစိုက်ခင်းများအတွင်း အလုပ်လုပ်ခြင်း(၁၇.၂၀ မိနစ်) ဖတ်စာ	၉။ ။ ဥယျာဉ်ခြံစိုက်ပျိုးခြင်းအကြောင်း (၁၈.၅၀ မိနစ်) ဖတ်စာ ၁၀။ မောင်လှနှင့် မောင်စိန် လူငယ်နှစ်ဦးအကြား အပြန်အလှန်စကားပြောခြင်း(၂၀.၃၃ မိနစ်) ဖတ်စာ ၁၁။ ။ ညချမ်းချိန်ခါအကြောင်း ( ၂၂.၁၀ မိနစ်) ဖတစာ ၁၃။ ဇီးကွက်တကောင်နှင့် ကျီးကန်းတကောင်အကြောင်း (၂၄.၁၅ မိနစ်) ဖတ်စာ ၁၂။ ။ မိုးရွာသောနေ့တနေ့အကြောင်း (၂၅.၅၀ မိနစ်) ဒုတိယတန်း၊ မြန်မာဖတ်စာအုပ်၊ ပြုစုသူ ဦးဝန် ဖတ်စာ စာမျက်နှာ ၃။ ။ ဗာရာဏသီမင်း၊ အမျက်ကြီးသောသားတော်နှင့် ရသေ့အကြောင်းဝတ္ထု (၃၀ မိနစ်) ဖတ်စာ စာမျက်နှာ ၅။ ။ ဖိုးလမင်းအကြောင်းကဗျာ (၃၀.၄၅ မိနစ်) ဖတ်စာ စာမျက်နှာ ၇။ ။ ဇာတ်တော်လာ ဟင်္သာကိုးသောင်းပုံပြင် (၃၅.၁၀ မိနစ်) ဖတ်စာ စာမျက်နှာ ၉။ ။ မဟောသဓာတရားစီရင်ခန်း(၃၉.၁၅ မိနစ်) ဖတ်စာ စာမျက်နှာ ၁၇။ ။ မင်းသုဝဏ်ရေးသားသော မြန်မာလများအကြောင်းကဗျာ/ ရတုခြောက်ပါး (၄၀.၂၉ မိနစ်) ဖတ်စာ စာမျက်နှာနံပါတ်မရှိ။ ။ မဟော်သဓာတရားစီရင်ခန်း (၄၃.၅၀ မိနစ်) ဖတ်စာ စာမျက်နှာ ၁၆။ ။ မင်းသုဝဏ်၏ ရှဉ့်ကလေးများ ကဗျာ(၄၄.၃၅ မိနစ်) ဖတ်စာ စာမျက်နှာ ၁၇။ ။ ခေါက်ရှာငှက် အကြောင်းကဗျာ(၄၆.၂၅ မိနစ်)
Alternative Title: Fonds Denise Bernot, Burmese, 1961, tape 050, side A
Date Created (W3CDTF): 1961-08
Description: Suite de la lecture du livre de lecture n°2 d'U Kun (le début se trouve dans l'enregistrement de 1961, bande 050_faceB) Madame Brenda Pe Maung Tin lit la fin du dialogue entre Maung Hla et Maung Kha, le second racontant l'histoire de Robinson Crusoe (jusqu'à 1.36mn; le début du dialogue se trouve à la fin de l'enregistrement de 1961, bande 050_faceB). Leçon 24: prononce des mots (trois tons), puis raconte le jataka du singe et du crocodile, dans lequel le dernier veut manger le coeur du premier. Le singe dit alors au crocodile que son coeur se trouve en haut d'un arbre de l'autre côte du fleuve, et lui propose de le faire traverser le fleuve pour ensuite aller manger son coeur. (jusqu'à 3.15mn) Leçon 25: prononce le mot ''kyaing'' (trois tons), puis lit un dialogue entre un enfant et sa mère, dans lequel elle lui raconte brièvement le conte de la tortue et du lièvre. (jusqu'à 3.48mn) Leçon 26: prononce des phrases descriptives sur l'état du ciel (nuages, lune etc...) (jusqu'à 4.06mn). Leçon 27: prononce dans (a) des phrases descriptives sur le paysage et dans (b) raconte que Maung Hla et Maung Ha se promène et décrivent ce qu'ils voient (jusqu'à 5.20mn). Madame Brenda Pe Maung Tin (inscription support bande Madame Boonwat est la locutrice, mais la voix ressemble à celle de Brenda Pe Maung Tin) annonce le titre de l'ouvrage: Première année, Recueil de textes de lecture birmans, écrit par U Wun (Min Thu Wun) et U Ba Lecture 1, p. 19: lit un texte descriptif sur un village, son environnement (forêt de manguiers, lac, rizières) et les animaux qui y vivent (jusqu'à 6.50mn). Lecture2p. 23: Madame Brenda Pe Maung Tin poursuit la description du village, les saisons, la faune, la mer non loin de là. (jusqu'à 8.15mn). Lecture 3, p. 27: Madame Brenda Pe Maung Tin poursuit la description du village, de la forêt, des vaches, des coqs sauvages (jusqu'à 9.40mn). Lecture 4, p. 31: Madame Brenda Pe Maung Tin poursuit la description du village, de la façon de s'y rendre, du rythme agricole, de la navigation sur le lac. (jusqu'à 11.15mn). Lecture 5, p. 35: Madame Brenda Pe Maung Tin poursuit la description du village, du maître d'école, de la vie scolaire (jusqu'à 12.38mn). Lecture 6, p. 39: Madame Brenda Pe Maung Tin présente un nouveau personnage, le petit chien de garde Taw Bwa (jusqu'à 13.55mn). Lecture 7, p. 43: Madame Brenda Pe Maung Tin raconte la promenade dans la forêt avec le petit chien Taw Bwa, décrit les grands banyans, la faune, les insectes. (jusqu'à 15.45mn) Lecture 8, p. 47: Madame Brenda Pe Maung Tin lit un texte parlant du travail des rizières. (jusqu'à 17.20mn) Lecture 9, p. 51: Madame Brenda Pe Maung Tin lit un texte parlant du jardinage. (jusqu'à 18.50mn) Lecture 10, p. 55: Madame Brenda Pe Maung Tin lit un dialogue entre deux jeunes hommes , Maung Hla et Maung Sein (jusqu'à 20.33mn). Lecture 11, p. 59: Madame Brenda Pe Maung Tin lit un texte parlant de la soirée, de la brise du soir, du bruit des insectes (jusqu'à 22.10mn) Lecture 13, p. 67: Madame Brenda Pe Maung Tin lit un texte parlant d'une chouette et d'un corbeau (jusqu'à 24.15mn). Lecture 12, p. 63: Madame Brenda Pe Maung Tin lit un texte parlant d'un jour de pluie (coupée et reprend jusqu'à 25.50mn). Madame Brenda Pe Maung annonce le titre de l'ouvrage: Deuxième année, Recueil de textes de lecture, par U Wun Lecture p. 3: texte parlant du roi de Bénarès quiaun fils colérique. Le roi l'emmène dans un parc où un ermite lui fait un sermon. Le prince mange des feuilles de l'arbre ''thama'', très amères. (jusqu'à 30.00mn) Lecture p. 5: poème sur la lune (jusqu'à 30.45mn) Lecture p. 7: jataka du canard sacré (hamsa) (jusqu'à 35.10mn) Lecture p. 9: jugement de Mahawthahta (jusqu'à 39.15mn). Lecture p. 17: poème sur les mois birmans par Min Thu Wun (jusqu'à 40.29mn). Lecture (non annoncée): jugement de Mahawthahta (jusqu'à 43.50mn). Lecture p. 16: poème de Min Thu Wun sur les écureuils (jusqu'à 44.35mn). Lecture p. 17: poème sur un oiseau de la forêt (jusqu'à 46.25mn).
ယ္ခုပြောကြားချက်သည် ဦးခွန်၏ စာအုပ်ဖတ်ရှုခြင်း ဒုတိယအပိုင်းဖြစ်သည်။ (ပထမပိုင်း ကိုအသံသွင်းချက် BER- 1961-BUR-050- B တွင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။) မစ္စဘရန်ဒါ ဖေမောင်တင်သည် မောင်လှနှင့်မောင်ခ နှစ်ဦးအကြားအပြန်အလှန်စကားပြောဆိုခြင်း အပိုင်းကိုဖတ်ကြားသည်။ ၎င်းအဆုံးပိုင်းသည် ရော်ဘင်ကရူးဆိုးအကြောင်းပြောဆိုကြ ခြင်းဖြစ်သည်။ (၁.၃၆ မိနစ်) သင်ခန်းစာ ၂၄။ ။ သူမသည် မြန်မာစကားလုံးများကို အသံအနေအထား (၃) မျိုးဖြင့် အသံ ထွက်ရွတ်ဆိုသည်။ ထိုနောက်ဇာတ်တော်လာ မျောက်နှင့်မိချောင်းအကြောင်းကိုပြောပြသည်။ မိချောင်းသည် မျောက်၏အသဲနှလုံးကို စားလိုသဖြင့် မျောက်ကမိချောင်းကို ၎င်း၏အသဲနှလုံးသည် မြစ်၏တဘက်ကမ်း သစ်ပင်ပေါ်တွင်ရှိကြောင်းပြောဆိုသည်။ မျောက်ကမိချောင်းအား ၎င်းစားလို သော မိမိ၏အသဲနှလုံးကိုယူရန် မြစ်တဘက်ကမ်းသို့ မိချောင်း၏ကျောပေါ်တွင်စီး၍ ဖြတ်ကူးရန် ကူညီ ရမည်ဟု အကြံပေးသည်။ (၃.၁၅ မိနစ်) သင်ခန်းစာ ၂၅။ ။ သူမသည် "ကြိုင်" ဟူသော ဝေါဟာရကို အသံထွက်ရွတ်ဆို (အသံအနေအထား ၃ မျိုးဖြင့် တလှည့်စီရွတ်ဆို)သည်။ ထို့နောက်သူမသည်မိခင်နှင့်ကလေးငယ်ကို ဇာတ်တော်လာ လိပ်နှင့် ယုန်အကြောင်းပြောပြသည်။ (၃.၄၈ မိနစ်) သင်ခန်းစာ ၂၆။ ။ မိုးကောင်ကင်တွင်မြင်ရသော အရာများအကြောင်းကို သရုပ်ဖော်ပြသော ဝါကျများ (၄.၀၆ မိနစ်) သင်ခန်းစာ ၂၇။ ။ မောင်လှနှင့် မောင်ခ လမ်းလျှောက်ရာတွင်တွေ့မြင်ရသောရှုခင်းများအကြောင်း ကို သရုပ်ဖော်ပြောကြားသည်။ (၅.၂၀မိနစ်) မစ္စဘရန်ဒါဖေမောင်တင်သည် စာအုပ်ခေါင်းစဉ်ကိုကြေညာသည်။ ပထမတန်း မြန်မာဖတ်စာအုပ်၊ ပြုစုသူ ဦးဝန် (မင်းသုဝဏ်) နှင့်ဦးဘ ပထမပိုင်း ဖတ်စာစာမျက်နှာ ၁၉။ ။ မစ္စဘရန်ဒါဖေမောင်တင်သည် ရွာတရွာနှင့် ယင်းရွာ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ တိရစ္ဆာန်များနှင့် သစ်ပင်ပန်းမန်များအကြောင်းဖတ်သည်။ (၆.၅၀ မိနစ်) ဖတ်စာ ၂ စာမျက်နှာ ၂၃။ ။ ရာသီဥတု၊ တိရစ္ဆာန်များနှင့် ရွာနှင့်မဝေးသောပင်လယ်ကြီး အကြောင်း (၈.၁၅ မိနစ်) ဖတ်စာ ၃ စာမျက်နှာ ၂၇။ ။ တို့တော။ တော၊ နွားများနှင့် တောကြက်ဖများအကြောင်း(၉.၄၀ မိနစ်) ဖတ်စာ ၄ စာမျက်နှာ ၃၁။ ။ ရွာလေးသို့မည်ကဲ့သို့ရောက်နိုင်ကြောင်း၊ ကျေးလက်တောရွာဘဝ၊ အင်းအတွင်း လှေငယ်သွားလာမှုအကြောင်း။ (၁၁.၁၅ မိနစ်) ဖတ်စာ ၅ စာမျက်နှာ ၃၅။ ။ ကျောင်း နှင့် ကျောင်းဆရာအကြောင်း (၁၂.၃၈ မိနစ်) ဖတ်စာ ၆ စာမျက်နှာ ၃၉။ ။ လုံခြုံရေးခွေးငယ်လေး တိုးပွါး အကြောင်း (၁၃.၅၅ မိနစ်) ဖတ်စာ ၇ စာမျက်နှာ ၄၃။ ။ တိုးပွါး တောအတွင်းလမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ညောင်ပင်များနှင့် တိရစ္ဆာန်များနှင့် ပိုးမွှားများအကြောင်း (၁၅.၄၅ မိနစ်) ဖတ်စာ ၈ စာမျက်နှာ ၄၇။ ။ စပါးခင်းများ၌ အလုပ်လုပ်ခြင်းအကြောင်း (၁၇.၂၀ မိနစ်) ဖတ်စာ ၉ စာမျက်နှာ ၅၁။ ။ ခြံစိုက်ခြင်းအကြောင်း(၁၈.၅၀ မိနစ်) ဖတ်စာ ၁၀ စာမျက်နှာ ၅၅။ ။ မောင်လှနှင့်မောင်စိန် လူငယ်နှစ်ဦးစကားပြောခန်း (၂၀.၃၃ မိနစ်) ဖတ်စာ ၁၁ စာမျက်နှာ ၅၉။ ။ ညနေခင်း နေဝင်ချိန်၊ ပိုးမွှားတို့၏အော်မြည်သံအကြောင်း (၂၂.၁၀ မိနစ်) ဖတ်စာ ၁၃ စာမျက်နှာ ၆၇။ ။ ဇီးကွက်တကောင်နှင့် ကျီးကန်းတကောင်အကြောင်း (၂၄.၁၅ မိနစ်) ဖတ်စာ ၁၂ စာမျက်နှာ ၆၃။ ။ မိုးရွာသောနေ့တနေ့အကြောင်း (၂၅.၅၀ မိနစ်ထိ) မစ္စဘရန်ဒါဖေမောင်တင်သည် စာအုပ်ခေါင်းစဉ်ကိုကြေညာသည် ဒုတိယတန်း မြန်မာဖတ်စာအုပ်၊ ပြုစုသူ ဦးဝန် ဖတ်စာ စာမျက်နှာ ၃။ ။ ဗာရာဏသီမင်းနှင့် အမျက်ကြီးသောသားတော်အကြောင်း။ ဘုရင်သည်သားတော်အား ဥယျာဉ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ ယင်းနေရာတွင် ရသေ့ က သားတော်အား တရားဟောသည်။ ထို့နောက် မင်းသားသည် အလွန်ခါးသောတမာရွက် ကိုစားခိုင်းပြီး ဥပမာပေး ဆုံးမသည်။ (၃၀ မိနစ်) ဖတ်စာ စာမျက်နှာ ၅။ ။ ဖိုးလမင်းအကြောင်းကဗျာ (၃၀.၄၅ မိနစ်) ဖတ်စာ စာမျက်နှာ ၇။ ။ ဇာတ်တော်လာ ဟင်္သာကိုးသောင်းပုံပြင် (၃၅.၁ မိနစ်) ဖတ်စာ စာမျက်နှာ ၉။ ။ မဟော်သဓာ တရားစီရင်ခန်း(၃၉.၁၅ မိနစ်) ဖတ်စာ စာမျက်နှာ ၁၇။ ။ မင်းသုဝဏ်၏ မြန်မာလများကဗျာ (၄၀.၂၉မိနစ်) ဖတ်စာ စာမျက်နှာမရှိ။ ။ မဟော်သဓာ တရားစီရင်ခန်း (၄၃.၅၀ မိနစ်) ဖတ်စာ စာမျက်နှာ ၁၆။ ။ မင်းသုဝဏ်၏ ရှဉ့်ကလေးများ ကဗျာ (၄၄.၃၅ မိနစ်) ဖတ်စာ စာမျက်နှာ ၁၇။ ။ ခေါက်ရှာငှက်များအကြောင်းကဗျာ (၄၆.၂၅ မိနစ်)
This is the second part of U Kun's reading book (the first part can be found in recording crdo-BER_1961_BUR_050_B). Ms Brenda Pe Maung Tin reads the end of the dialogue between Maung Hla and Maung Kha, this last one telling the story of Robinson Crusoe (until 1.36 min.). Lesson 24: she pronounces words in Burmese with the three different tones, then she tells the jataka of the monkey and the crocodile. As the crocodile wants to eat the monkey's heart, the monkey tells him that his heart is inatree on the other side of the river. The monkey suggests the crocodile to help him cross the river on his back so he could be able to go and get the heart for the crocodile to eat (until 3.15 min.) Lesson 25: she pronounces the word ''kyaing'' (with the three tones in turn), then she readsadialogue betweenachild and his mum. The mum tells him the jataka of the tortoise and the rabbit (until 3.48 min.) Lesson 26: descriptive sentences about what she can see in the sky (until 4.06 min.). Leçon 27: description about the landscapes and what Maung Hla and Maung Ha see when they takeawalk (until 5.20 min.). Ms Brenda Pe Maung Tin announces the title of the book: ‘’First year, Myanmar Text Book, by U Wun (Min Thu Wun) and U Ba’’ First part, reading p. 19: Ms Brenda Pe Maung Tin reads aboutavillage and its surroundings, the fauna and flora (until 6.50 min.). Reading 2, p. 23: about the seasons, the fauna, and the sea not far from the village (until 8.15 min.). Reading 3, p. 27:about the forest, the cows, the wild roosters (until 9.40 min.). Reading 4, p. 31: about how to get to the village, the rural life, the navigation on the lake (until 11.15 min.). Reading 5, p. 35: about the school and the school teacher (until 12.38 min.). Reading 6, p. 39: about the little watch dog Taw Bwa (until 13.55 min.). Reading 7, p. 43: about walking Taw Bwa in the forest, the banyan trees, the fauna, the insects. (until 15.45 min.) Reading 8, p. 47: about work in the rice fields (until 17.20 min.) Reading 9, p. 51: about gardening (until 18.50 min.) Reading 10, reading p. 55: aboutadialogue between two young men , Maung Hla and Maung Sein (until 20.33 min.). Reading 11, p. 59: about the evening brise, the sound of the insects in the evening (until 22.10 min.) Reading 13, p. 67: about an owl andacrow (until 24.15 min.). Reading 12, p. 63: aboutarainy day (until 25.50 min.). Ms Brenda Pe Maung Tin announces the title of the book: ‘’Second year, Myanmar Text Book by U Wun’’ Reading p. 3: about the king of Benares and his angry son. The king takes him toapark whereahermit preaches him. The prince then eats the very bitter leaves of the Thama trea. (until 30.00 min.) Reading p. 5:apoem about the moon (until 30.45 min.) Reading p. 7: jataka of the sacred duck (hamsa) (until 35.10 min.) Reading p. 9:ajudgement of Mahawthahta (until 39.15 min.). Reading p. 17:apoem about the Burmese months by Min Thu Wun (until 40.29 min.). Reading (no page number):ajudgement of Mahawthahta (until 43.50 min.). Reading p. 16:apoem of Min Thu Wun about squirrels (until 44.35 min.). Reading p. 17:apoem about forest birds (until 46.25 min.).
Identifier: Ancienne cote: crdo-BER_1961_BUR_050_A
Identifier (URI): https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/meta/cocoon-0f67c0f3-3a2c-3b54-963f-2ebc07dd226d
Is Format Of (URI): https://cocoon.huma-num.fr/data/bernot/private_bernot/masters/BER_1961_BUR_050_A.wav
Citation: Bernot, Denise (researcher); Candier, Aurore (consultant); Centre national de la recherche scientifique (sponsor); Institut national des langues et civilisations orientales (sponsor); Vittrant, Alice (depositor); Labex ASLAN (CNRS, ENS, Université Lumière Lyon 2) (sponsor); Khin Khin Zaw (consultant). 1961. Laboratoire de langues et civilisations à tradition orale.